Ukuqasha: Uhulumeni wase-US Uzobhubhisa Ukuhweba Kwe-inthanethi | Martech Zone
Umnotho usenkingeni e-United States. Ngokusetshenziswa kwerekhodi, igebe lomnotho liyaqhubeka nokukhuphuka, ubumpofu buyakhuphuka, inani lezakhamizi ezincike ekusweleni kwemisebenzi, izitembu zokudla, ukukhubazeka noma inhlalakahle likumazinga okurekhoda. Munye kuphela umkhakha womnotho waseMelika ochumayo - onemisebenzi ekhokhelwa kahle, ukuvuleka kwemisebenzi eminingi, amathani emali yokutshala imali, kanye nokuthengisa okukhulayo. Lowo mkhakha uwukuthi i-Internet.
Ngabathengisi abakhulu bamabhokisi amakhulu abahluphekayo nohulumeni ukusebenzisa imali ezifundweni ezitholakala kwizitho zangasese zedada, ikusasa le-ecommerce boom libukeka limfiliba njengeSenethi ngisanda kuvuma umthethosivivinywa wentela Yokuthengisa ye-Inthanethi. Ngakho-ke… ingxenye eyodwa yomnotho engeyona inkinga manje izogcina isijoyina yonke enye indawo yomnotho ebikhona wasiza nguhulumeni wesifundazwe.
Uma lo mthethosivivinywa wedlulisiwe, kungukuqala kokuphela kokuchuma uhlelo lwethu lwemakethe yamahhala lwe-Intanethi olusinike lona kule minyaka engama-20 edlule. Abadayisi bezigidigidi abakhulu abaphethe, abaphethe futhi abaphethe amanani nokusatshalaliswa kwempahla nezinsizakalo manje sebelahlekelwa yi-Intanethi… futhi bakhala ngaphansi. Yibo abahola phambili ekucindezeleni abaholi bethu ukuthi bathumele i-Intanethi.
Wonke umuntu uvulekele ukuncintisana ku-inthanethi
Kufanele babe namahloni. Cabanga ngakho… aziyilutho ngaphandle kwephuzu lokusabalalisa eleza ngaphezulu kwezindleko zezimpahla ngaphambi kokuba sizithole. Ngiyathemba uma ubheka emuva emlandweni ukuthi abathengisi bakhala ngokungafanele lapho i- Ikhathalogi yeSears yenza indlela eya emnyango wabathengi futhi manje sebengakwazi ukufinyelela kumikhiqizo nezimpahla ezingabizi nge-imeyili eqondile. Bonke abathengisi abakhulu bebhokisi babenezimali nethuba lokushintshela ibhizinisi labo kwi-Intanethi. Uma behlulekile ukwenza kanjalo, kufanele babhekane nemiphumela.
Izinkampani Zasendaweni Kufanele Zikhokhe Izintela Zendawo
Ukuba nomthengisi omkhulu wendawo uyanezela izindleko zomphakathi wendawo - kusuka ezindlekweni zokuhamba, izindleko zomgwaqo, izindleko zamaphoyisa nezokwelapha, izindleko zokusetshenziswa… kufaka phakathi amanzi, ugesi nokulahlwa kukadoti. Izintela zokuthengisa zombuso nezasekhaya ziqeda lezo zindleko esifundeni sendawo. Luhlelo olunengqondo. Uma ngithenga ku-inthanethi, kubiza umphakathi wakithi wangakini. Izinto zokuhamba zikhokhelwa inkampani yokuthumela kanye nentela kaphethiloli. Asikho isidingo samarobhothi, ukuboshwa kwebiwe ezitolo, akukho ukulahlwa kwemfucuza, asikho isidingo sezinsiza ezingeziwe… nada.
Abathengisi abalahlekelwa Ibhizinisi ngenxa Yezintela Zendawo
Lapho kukhona izinzuzo zokuthenga kumthengisi wendawo… Ngiyakwazi ukushayela ngiye ekhaya nezimpahla, ngingazama izingubo, ngikwazi ukubafaka imishini, ngithole ukwesekwa komkhiqizo kubo, noma ngikwazi ukukuthengiselana ngaphandle kokulibala. Imvamisa ngithenga kumthengisi wendawo - kepha kuncane kakhulu kunakuqala. I-Intanethi isibe lula kakhulu. Angithengi ku-inthanethi ngoba angiyikhokhi intela lapho… Ngithenga ku-inthanethi ngoba ngingakwenza ngocingo lwami ngemizuzu nje embalwa. Akukho ukushayela, ukupaka, ukulinda emugqeni, akukho okuseshwa kwemigqa engapheli yemikhiqizo, akukho bantu abahluphayo bensizakalo yamakhasimende, noma abaphoqayo, noma abangenantshisekelo, noma kungekho usizo ngokuphelele.
Ukuvula ibhokisi lePandora lezintela zendawo
Isisekelo sentela sibala ngaphezulu Izifunda zentela yokuthengisa ezizi-9,600. Cabanga ukuthi yonke indawo ye-ecommerce manje sekufanele ihlele kuzintela ezingama-9,600 ezahlukahlukene zendawo ezihlala zishintsha. Zonke izinhlelo zokusebenza zeselula zidinga ukwakhiwa kabusha ukuze zihlelele emithethweni ehlukile yentela engu-9,600. Abahlinzeki be-ecommerce bazodinga ukufaka intela ku yonke indawo benza ibhizinisi ngaphakathi. Amantongomane.
Intela Yasekhaya izobulala Ubusomabhizinisi
Yivalelise kuwo wonke amabhizinisi amancane kuwebhu angakwazi ukungena ngaphezulu okuhambisana nalezi zindleko. Impela… izixazululo ezintsha zizoguquka, amabhizinisi amasha aphatha ukufakwa kwentela kwakho. Kepha izindleko zizofakwa kuwo wonke umkhiqizo owuthengayo - ngaphezu kwentela yokuthengisa entsha. Izindawo zokuhweba kuphela ezisele kuzoba ngabafana abakhulu abakwazi ukukhokhela izindleko futhi baqale lo mkhuba kwasekuqaleni. Amabhizinisi amancane kanye nosomabhizinisi bahlaselwa.
Ngabe lokhu kuzokwenza inkundla yokudlala kahle phakathi kwabathengisi kanye ne-ecommerce? Akukho okulungile ngakho. Umkhakha wokugcina womnotho waseMelika ochumayo manje uzojoyina wonke umuntu ekudilikeni emsebenzini, ukungabi khona kwemali, nokuphuma ekuthengisweni kwebhizinisi. Kanye nabathengisi abakhulu bebhokisi abesevele beya kulolo hlangothi.
Tags: ezokuhweba ngekhompyuthainternetintela yokuthengisa nge-inthanethiintela ye-inthanethiintela yokuthengisa yendawo
Ngo-Apr 22, i-2013 ku-6: i-04 PM
Ngicabanga ukuthi kufanele siqale ukukhokha intela nge-imeyili ukuze “silunge” eposini.